MPITARIKA NY ORINASA ANARANA AO NIZERIA ORINASA FIOFANANA TAO NIZERIA - Ny Mpisolovava rehetra ao amin'ny tontolo izao! Ara-dalàna ny trano fisotroana kafe miaraka amin'ny mpahay lalàna an-tserasera.
MPITARIKA NY ORINASA ANARANA AO NIZERIA ORINASA FIOFANANA TAO NIZERIA
Ny valim-ny fanontaniana toy izany dia tsy lavitra-naka
Manao raharaham-barotra ao Nizeria na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao vao manomboka miaraka ny orinasa fisoratana anaranaNy Orinasa Raharaham-Commission(CAC) dia ny governemanta sampan-draharaha miandraikitra ny fampidirana ny orinasa ao Nizeria. Raharaham-barotra ny fisoratana anarana ao Nizeria efa notsorina amin'ny CAC nandritra ny taona maro.
Izaho no teo amin'ny fandoavam-bola sehatra
Amin'izao fotoana izao, ny fomba fitsaboana ho an'ny orinasa ny fisoratana anarana dia haingana sy mahomby. Ankoatra ny manana ny foibeny ao Abuja, ny CAC birao dia hita any amin'ny saika isan-panjakana ny renivohitra ao Nizeria. Ny fomba ny orinasa anarana ao Lagos i Nizeria ihany koa no fomba arahina eo amin'ny CAC ny foiben-toerany ao Abuja sy ny hafa rehetra-panjakana ao Nizeria. Ny CAC deraina ny mpiasa na ny mpisolo vava dia afaka mora foana ho nifandray tamin'ny olona izay mitaky ny fanampian'ny professional mba hanatanteraka ny fampidirana ny vaovao orinasa. Ny lalàna dia mitarika ny orinasa anarana ao Nizeria dia ny Orinasa sy ny Mpiara-dia manan-danja Act, (BED) ny Lalàna Federaly ao Nizeria. Ny Lalàna no tari-dalana ho an'ny fananganana ny misy karazana orinasa any Nizeria ary ny hafa ancillary raharaha.
Tsy toy ny Etazonia izay ny fanjakana tsirairay dia manana ny orinasa firaketana sy ny isam-batan'olona dia afaka misoratra anarana ny orinasa, ny orinasa anarana ao Nizeria no foibe sy ny orinasa ihany no afaka ny ho voarakitra miaraka amin'ny CAC ihany.
Misy isan-karazany ny orinasa fiofanana avela eo ambany Nizeria ny orinasa lalàna. Maro ireo olona mikatsaka ny hanao raharaham-barotra ao Nizeria, indrindra fa ho an'ny fotoana voalohany, matetika dia te-hahafantatra izay karazana orinasa no tena mety na mety ao Nizeria.
Tsy miankina andraikitra voafetra voafetra dia mazava ho azy fa ny tsara indrindra karazana orinasa tsy miankina olona mitady mba hanomboka ny raharaham-barotra ao Nizeria.
Rehefa avy nilaza fa, izaho dia vetivety ny toetry ny karazana orinasa izay dia afaka ny ho voasoratra ao Nizeria. Fampiharana ny fepetra voalazan'ny andininy Faha CAMA, ireo karazana telo ireo orinasa afaka ny ho voasoratra ao Nizeria: Ny Asa ankoatra izany dia nolazainy fa misy ny telo etsy ambony orinasa angamba orinasa tsy miankina na ny orinasa-bahoaka, ary araka izany, mahatonga azy ho enina karazana orinasa izay dia afaka ny ho voasoratra ao Nizeria araka ny fepetra momba ny Asa.
Na izany aza, dia misy zava-tsarotra sy ny lafiny ara-teknikan'ny izay mety ho sarotra ho an'ny sasany karazana ny voalaza etsy ambony orinasa mba ho voasoratra ho toy ny orinasa-bahoaka.
Ohatra, izany dia saika tsy misy vahoaka orinasa mba ho voasoratra ho toy ny orinasa voafetra ny antoka na tsy manam-petra ny orinasa ao Nizeria. Noho izany, amin'ny ankapobeny dia mino fa efatra karazana ihany ny orinasa izay mety ho afaka misoratra anarana ao Nizeria. Araka izany, ny CAC ao amin'ny tranonkala ofisialy ny fanjakana toy izany efatra karazana orinasa izay dia afaka ny ho voasoratra ao Nizeria toy izao manaraka izao: Rehefa nilaza ny -karazany ny orinasa misy fisoratana anarana ao Nizeria, dia tena manan-danja bebe kokoa averinao lazalazaina fa teo anivon ny -karazany ny orinasa voalaza, tsy miankina andraikitra voafetra ny orinasa no tena be mpampiasa amin'ny endrika raharaham-barotra ny orinasa ao Nizeria. Tsy miankina andraikitra voafetra orinasa manana tombontsoa maro, izay ahitana fa voafetra ho mandrakizay nifandimby, voafetra ny madio sy ny misaraka toetra ara-dalàna. Ambonin'izany rehetra izany, izany irery ihany no hanangana ny orinasa izay dia afaka mora foana sy haingana voasoratra ao Nizeria. Araka ny hita etsy ambony, na dia misy hafa karazana orinasa tsy miankina izay afaka ny ho voasoratra ara-panjakana fantatra amin'ny hoe ny vahoaka voafetra orinasa(PLC), ny ambony ny tokonam-baravarana manaraka ny fepetra takiana tia ny fiofanana hanao izany ratsy tarehy ho olona manomboka barotra vaovao. Ankoatra izany, vahoaka madio ihany ny orinasa ihany koa dia iharan'ny isan-karazany ivelany lalàna ivelan'ny CAMA ho azy mba hiasa. Ohatra, isaky ny PLC dia tsy maintsy manaraka ny fepetra sy ny fepetra takiana momba ny Fampiasam-bola sy ny Fiarovana ny Lalàna(ISA) sy ny hafa SEC Fitsipika sy ny mari-pamantarana ny ny fitantanana orinasa. Ankoatra izany, ny iray amin'ireo antony ny orinasa ihany antoka mety tsy ho tsara na mety ho ny raharaham-barotra dia ny zava-misy fa ny orinasa voafetra ny antoka dia mety tsy ho nanangana afa-tsy ny fanekena ny lehiben'ny Fampanoavana ao amin'ny Federasiona.
Na dia orinasa iray voafetra amin'ny alalan'ny antoka atao koa azo ampiasaina ho an'ny tombom-barotra, izany dia zara raha ampiasaina ho toy ny tombom-barotra-mirona ao Nizeria, fa ho an'ny tanjona manokana toy ny orinasa ara-tsosialy andraikitra na fiantrana.
Kosa Nampidirina mpitandrim-pananana dia azo ampiasaina na tsara kokoa ny tanjona. Ny hafa karazana orinasa, izay tsy misy fetra ny madio orinasa mety afa-tsy ho nanolorana azy ho ampiasaina any amin'ny ray aman-dreny orinasa naniry ny hanana toy izany ny ara-bola amin'ny tsy misy fetra mety. Izany dia tsy amin'ny fomba rehetra sahaza ho an'ny olona tsirairay izay mikatsaka ny startup sahy, toy ny soa lehibe ny fampidirana ny orinasa, izay ny fahafahana fetra ny madio na mety tsy ho endri-javatra amin'ny tsy manam-petra ny orinasa.
Ny fomba fitsaboana ho an'ny orinasa vahiny fisoratana anarana ao Nizeria dia saika mitovy ny fomba ny orinasa ao an-toerana ny fisoratana anarana ho an'ny Nizeriana, afa-tsy noho ny ara-dalàna fepetra takiana fa ny orinasa vahiny ny fandraisana anjara any Nizeria dia tsy maintsy ho capitalized amin'ny kely indrindra ny N Tapitrisa ny share renivohitra.
Ny fananana ny momba ny etsy ambony, dia tsy misy intsony ao isalasalana fa ny mety indrindra karazana orinasa izay mety ho voasoratra ao Nizeria no andraikitra voafetra orinasa, izay fomba fisoratana anarana isika, dia be ny mifantoka amin'ny ny eto. Fizarana faha- amin'ny Orinasa sy ny Mpiara-dia manan-danja manome izay mitaky ny kely indrindra amin'ny ny olona mba hanorina andraikitra voafetra orinasa. Fizarana -ny ihany Manao mitaky ny orinasa rehetra voasoratra anarana ao Nizeria manana na foana ny isa kely indrindra amin'ny tale. Tokana olona na fikambanana amin'izao fotoana izao tsy afaka ny endrika orinasa iray ao Nizeria. Na izany aza, ray aman-dreny tokana orinasa na ny orinasa vahiny mitady mba hisoratra anarana iray fanampiny ao Nizeria mety hanendrena olona roa ho toy ny mpitantana ny orinasa vaovao, na ara-bola. Ny vola lany amin'ny ny orinasa anarana ao Nigeria dia miankina amin'ny maro ny share renivohitra ny orinasa ny tolo-kevitra mba ho voasoratra ara-panjakana. Ny ambony ny share renivohitra ny orinasa, ny ambony ny famenoana sy ny saran'ny hajia adidy hofany ny governemanta. Amin'ny ankapobeny, ny CAC ofisialy nametraka sarany sy ny hajia adidy ho an'ny vaovao mahazatra orinasa Iray Tapitrisa Naira mizara renivohitra dia toy izao manaraka izao: Ny ambony saram ireo manokana ny ny vola lany ny teni-vavolombelona ihany amin'ny alalan'ny ara-dalàna no manao azy sy ny fanodinana professional saran'ny. Ny fanodinana na professional sarany mety ho voampanga noho ny fiahian'ny mpandraharaha nandritra ny fanodinana ny fisoratana anarana mitovy amin'ny mpandraharaha iray hafa. Ankoatra ny manokana voafetra madio orinasa, ary ny telo hafa karazana orinasa voalaza etsy ambony, mbola misy endrika hafa momba ny fampitambarana dia mety atao amin'ny CAC. Ireo karazana momba ny fampitambarana dia ahitana ny anarana mpandraharaha, fa ny kely ambaratonga tompon'ny raharaham-barotra, izay no ahitana miavaka ara-dalàna ny toetra sy ny Nampidirina mpitandrim-pananana, fantatra ihany koa amin'ny hoe fikambanana Tsy miankina amin'ny fanjakana Fikambanana(ONG), izay dia ilaina ho an'ny fikambanana ara-pivavahana, ara-tsosialy ny fikambanana sy mpanao asa soa fototra. Eto am-pamaranana, izany dia tena mazava fa izany dia tsara kokoa mba hisoratra anarana amin'ny andraikitra voafetra orinasa toy manohitra ny endrika hafa toy ny orinasa dia manana tombontsoa maro sy mora mba hisoratra anarana. Farany, ny dingana manontolo ny orinasa anarana ao Nizeria amin'ny CAC mety ho vita ao anatin'ny ora raha ny ilaina rehetra fampidirana ireo antontan-taratasy efa napetrany tao an-toerana. Ianao no mila fanampiana ho an'ny orinasa ny fisoratana anarana na ny hafa mialoha na ny lahatsoratra fampidirana zava-dehibe? Raha izany no izy, mifandray amintsika amin'ny alalan'ny eto ambany ny antsipiriany mba hanontany za-draharaha amin'ny orinasa mpisolovava monina ao Nizeria ianareo dia mba te-hisoratra anarana ny orinasa ny anarany (Enterprise).Ohatrinona ary inona no d ilaina ny antontan-taratasy ilaina. Azafady, azo atao ve ny niova fo voasoratra anarana raharaha mba LTD. Raha eny, inona ny vidiny. Tiako ho fantatrareo rehetra sy ny fomba fiasa na ny fepetra mila soa aman-tsara misoratra anarana manokana voafetra ny orinasa. Aho ho mpanjifa entana Misaotra miarahaba, izaho dia te-hisoratra anarana ho an'ny tsy miankina Andraikitra Voafetra Orinasa Iray Tapitrisa Mizara amin-katsaram-Panahy hanampy ahy ny amin'ny zavatra takiana, ny fomba sy ny vola. Azafady aho manokana ny raharaham-barotra foibe izay manao volo mikolo sy ny TIC asa aho ary te-hisoratra anarana dia amin'ny CAC. Ny orinasa, Alltech rivotra-pana asa efa voasoratra ara-panjakana, raha toa ka tiako mba hanatsarana Voafetra, inona no takiana. ohatrinona ny tokony ho fiampangana miaraka amin'ny taratasy fanamarinana.aho no tokony mifidy ny misy habetsahana ambanin'ny fanampiny dika mitovy miangavy mba hitarika ahy aho te-hisoratra anarana amin'ny orinasa eo ambany Voafetra. Masìna ianao, inona no takiana.
Inona ary ny zavatra ilaina amin'ny fisoratana anarana. Ary inona no sarany Tiako mba hisoratra anarana amin'ny Andraikitra Voafetra Orinasa Iray Tapitrisa Mizara, mba ho ampiasaina ho an'ny firaketana an-tsoratra label ankoatry ny zavatra hafa koa.
Aho ao ny Herinaratra injeniera asa sy ny tranobe fanorenana, izay karazana ny fisoratana anarana dia tokony hatao Azfd, aho amin'ny fanosotra sy ny fahasalamana misotro famokarana inona no karazana Raharaham-barotra ny anarana aho Dia mila dia tsy voafetra ny anaran'ny orinasa sy ny fomba no be izany vidiny efa voatokana ny anarany na dia tsy dia mila ampiana ny teny hoe 'Tahiry' ao ny anarany isika satria te-hifantoka amin'ny tahiry sy ny fampiasam-bola miaraka amin'ireo liana amin'ny faritra hafa ara-toekarena raharaham-barotra. Azafady, tokony ho nitarika ny dingana momba ny fampitambarana sy ny asa satria ny fifantohana dia eo amin'ny tahiry sy ny fampiasam-bola.
Koa, ahoana no hahatonga ny anjara sy ny IPO sy SEC olana satria nazava ny zava-misy fa izahay miasa ao amin'ny tahiry sy ny fampiasam-bola.
Efa voatokana ny orinasa anarana aho fa mbola eo am-panaovana ny fisoratam ny raharaham-barotra an-tserasera. Moa ve tena mila ny Mpisolovava iray mba hamitana ny dingana? Mba te-hisoratra anarana LTD orinasa, ohatrinona h dia izay lany sy izay dia ny antontan-taratasy ilaina sy ny antsipirihany. Misaotra, tiako ho fantatrareo rehetra sy ny fomba fiasa na ny fepetra mila soa aman-tsara misoratra anarana manokana voafetra ny orinasa. Inona no tena mila misoratra anarana ny orinasa anarana, ny vidiny? Raha tiako ny hanatsarana izany tanteraka register ny orinasa taty aoriana, inona no ilaiko. Manao raharaham-barotra ny anarana manana CAC isan'ny olana izany? Manana fiangonana ary tiako izany voasoratra, inona no ataoko ary ohatrinona ny vidiny mba hisoratra anarana amin'ny asa fanompoana. Misaotra, efa te-hisoratra anarana ny orinasa izay dia mifantoka bebe kokoa momba ny varotra ny pharmaceuticals sy ny mpanjifa entana, izay karazana orinasa no tsy mety, satria izany rehetra izany fisoratana anarana ny zavatra dia mbola manahiran-tsaina ahy. Afaka misoratra anarana amin'ny andraikitra voafetra orinasa ity karazana raharaham-barotra. Te-hanao ny raharaham-barotra fisoratana anarana ahoana no hihaona mpisolovava iray izay hanampy ahy ho an'ny kely-sehatra fandraharahana satria tsy te-hianjera eo an-tanan scammer toy ny habetsahany surveyor, araka ny fisoratam amin'ny NIQS, inona no soa mihevitra ve ianao fa dia accrue ny ahy tsy nisoratra anarana ny orinasa. Mba miangavy re, izahay dia tsy afaka ny hamantatra ny misy soa mety ho nekena ho anao. Na izany aza, dia afaka hanampy anao amin'ny orinasa fisoratana anarana isaky ny vonona ianao. Misaotra noho ny fanampian'i ahy ny momba ny fisoratana anarana, ka raha izany dia ny mpamorona lamaody azy izy. Na misy handwork, ohatrinona no lany izy ireo mba hisoratra anarana. Misaotra anao Ny orinasa, Alltech rivotra-pana asa efa voasoratra ara-panjakana, raha toa ka tiako mba hanatsarana Voafetra, inona no takiana. ao Nizeria Amin'izao fotoana izao, ny raharaham-barotra fisoratana anarana dia afaka mora foana ho nentina nivoaka an-tserasera amin'ny alalan'ny CAC orinasa an-tserasera fisoratana anarana vavahadin-tserasera amin'ny ny fanampiana ny fiahian'ny mpisolovava manamarina ny fepetra takina fampidirana (CAC), izay noforonina mitondra ny Orinasa sy ny Mpiara-dia manan-danja Lalàna ao Nizeria.
FIFAMPIDINIHANA EO AMIN'NY TRANO OLANA
Ombud eller biträde i rättegång och skiljeförfarande - Ecovis Lettland Lag